ရလဒ်ဆိုးများကြောင့် နည်းပြမော်ရင်ဟိုကို ထုတ်ပယ်ကြောင်း မန်ယူအတည်ပြု၊ ယာယီနည်းပြအဖြစ် ရာသ? - Yangon Media Group
မန်ယူအသင်းသည် ယခုနှစ်ရာသီတွင် ရလဒ်ဆိုးများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် နည်းပြမော်ရင်ဟိုကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ မန်ယူအသင်းသည် လီဗာပူးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် ၁၇ပွဲကစားခဲ့ရာ၌ ၂၆ မှတ်သာရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉ဝ-၉၁ ဘောလုံးရာသီနောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံးရာသီအစဖြစ်ခဲ့သည်။ မန်ယူအနေဖြင့် ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူးကာလအတွင်း ကစားရမည့်ပွဲရလဒ်များအပေါ်မူတည်၍ မော်ရင်ဟို၏အနာဂတ်ကိုဆုံး ဖြတ်မည်ဟု အစောပိုင်းသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခု အခါ မော်ရင်ဟိုကိုထုတ်ပယ်လိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာလုံး ၆၅ လုံးသာပါရှိသော မန်ယူ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် နည်းပြမော်ရင်ဟိုအနေဖြင့် အသင်းမှချက်ချင်း ထွက်ခွာပြီဖြစ်ပြီး မန်ယူနည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူစဉ်အချိန်အတွင်း မော်ရင်ဟို၏စွမ်းဆောင်မှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ကာ အနာဂတ်တွင် အောင်မြင်စေရန်လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းကြောင်း၊ အသင်းအနေဖြင့် အမြဲတမ်းနည်း ပြသစ်တစ်ဦးကိုခန့်အပ်ရန်လုပ် ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ယာယီနည်း ပြတစ်ဦးကို ရာသီကုန်အထိ တာဝန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော် ပြခဲ့သည်။
မန်ယူအနေဖြင့် ယာယီနည်း ပြအဖြစ် မည်သူကိုခန့်အပ်မည်ဆိုခြင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိသေးသော်လည်း မော်ရင်ဟို လက်ထက်တွင် လက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သော ကာရစ်က ယာယီနည်းပြဖြစ်လာရန် ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပြီး ကစားသမားများကလည်း ကာရစ်ကိုထောက်ခံထားကြကြောင်း Sky သတင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
မော်ရင်ဟိုသည် မန်ယူနှင့် လက်ကျန်စာချုပ်သက်တမ်း တစ်နှစ်ကျန်ရှိနေသေးသည့်အပြင် အသင်းမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေဆဲဖြစ်သည့်အတွက် မန်ယူအသင်းအ နေဖြင့် မော်ရင်ဟိုအား လျော် ကြေးပေါင် ၂၂.၅သန်းပေးချေရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မော်ရင်ဟိုလက်ထက်တွင် မန်ယူအသင်းမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် တစ်ပွဲပျမ်းမျှသွင်းဂိုး ၁.၆၂ ဂိုးသာရှိခဲ့သဖြင့် ယခင်နည်းပြမို ယက်စ်ထက် စွမ်းဆောင်ရည်ပို နည်းခဲ့သည့်အပြင် ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်း ယခုနှစ်ရာသီတွင် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နေပြီး အဆင့်-၁၉နေရာမှ ဟက်ဒါဖီးလ်ထက်ပိုများကာ ၂၉ ဂိုး အထိပေးထားရသည်။ လက်ရှိတွင် အသင်းလက်မဲ့ ဖြစ်နေသောနည်းပြများတွင် ဇီဒန်း၊ ကွန်တီ၊ ဝင်းဂါး၊ ရွိုင်ကိန်း၊ ရက်နပ် စသူတို့ရှိနေချိန်တွင် မန်ယူ၏အမြဲတမ်းနည်းပြသစ်ဖြစ် လာရန် ဇီဒန်းက ရေပန်းအစားဆုံး ဖြစ်နေသည်။
ဇန်နဝါရီကတည်းက ဂျူဗင်တပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုသည်ကို စီရော်နယ်ဒို ဖွင့်ဟ
ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်ရေယာဉ် ရေနံချောင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိ၊ ဒေသခံပြည်သူများ လှိုက်လှဲစြွာ??